कस्तो रहला आगामी तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर बजारको अवस्था ? - Arthasansar
कस्तो रहला आगामी तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर बजारको अवस्था ?
शुक्रबार, ०२ बैशाख २०७९, १८ : २७ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित बन्न पुुगेको होटल क्षेत्र यतिबेला बल्ल तङग्रिने प्रयासमा देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय होटलहरुले कोरोना संक्रमणको दर कम भएपछि आफ्नो योजना रणनीतिहरुलाई बदल्न पुुगेका छन् । दुई वर्ष भन्दा बढी पर्यटन व्यवयास समेत ठप्प रहेको अवस्थालाई बुुझेका होटल ब्यावसायीहरुले कोभिड पछिको होटल तथा पर्यटन लक्षित योजनाहरु अघि सारेका छन् । पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम लक्षित कार्यक्रमहरु होटलहरुले सुुरुवात गरिसकेका छन् । व्यवसायलाई नयाँ ढंगलबाट लैजानुुपर्छ भन्ने बुुझेपछि होटल व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी र सम्भवनाका ढोकाहरु पनि खुुल्दै बुझ्न सकिन्छ ।
सेयर लगानीकर्ताहरुको लागि पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीगर्ने संम्भवना पनि होटल तथा ब्यबसायीहरुले चालेको रणनीतिक कदम र कार्यकूशलता नै हो । होटल क्षेत्रहरुले बढाएको लगानी र आकर्षणकै कारण सेयर बजारमा होटल क्षेत्रले पनि छुुट्र्टै पहिचान बनाउन थालेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सुुचिकृत तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन थालेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलः
तारागाउँ रिजेन्सी होटल नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमा सुुचिकृत कम्पनी मध्ये हो । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य (विहिबार सम्मं)मा तिन सय ७२ रुपैयाँ पुुगेको छ । कम्पनीको सुुरुवाति (ओपेनिङ) मूल्य तीन सय ६९ रुपैयाँबाट बढेर बजार बन्दुहुँदासम्म कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो विहिबार तीन रुपैयाँले बढेको छ ।
कम्पनीको सेयर मूल्य भ्यालुु एक सय रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । ५२ हप्ता अघि कम्पनीको न्युुनतम सेयर मूल्य दुुई सय ७५ रुपैयाँ रहेको थियो भने उच्च्चतम् मूल्य चार सय ६८ रुपैयाँ रहेको थियो। कम्पनीको ५२ हप्ताको उच्चतम विन्दुुमा पुुग्नलाई ९६ रुपैयाँले मात्र बढ्न बाँकि रहेको छ भने न्युुनतम् मूल्यभन्दा ९७ रुपैयाँले बढेको छ । पछिल्लो समयमा होटलले लगानीको मात्रा बढाउँदै लैजदा लगानीकर्ताको आकर्षण यस होटलमा बढेको छ । सेयर आएको आकर्षणले यस कम्पनीको सेयर मूल्यपनि बढेको छ ।
वित्तीय अवस्था :
कम्पनीले आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९ ) मा को दोस्रो त्रैमासिकमा ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि कम्पनीले सुुरुवाति घाटा बेहोरेको छ । होटल ब्यावसाय र व्यवस्थापनमा समस्या आएका कारण कम्पनीले घाटा बेहोर्नपरेको हो । होटलले आर्थिक आर्थिक वर्षका दोस्रो त्रैमासमा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दा हाल कम्पनीको खुुद घाटा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीले कर पनि तिर्नबाँकि रकम भएकाले पनि कम्पनी घाँटामा रहेको हो ।
जस कारणले कम्पनीले लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गर्न समेत सुकेको छैन । होटलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा ७ दशमलव ३६ प्रतिशत,२०७४ /०७५मा १२ दशमलव ६१प्रतिशत,२०७५ /०७६मा १२ प्रतिशत र २०७६/०७७ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । त्यसपछि होटलको व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउँन नसक्दा लगानीकर्तालाई नाफा वितरण गर्न सकेको छैन
यहाँ कम्पनीको ५० औंदिनको कारोबारलाई हेरिएको छ । होटलको प्राविधिक पक्ष कम्पनीको प्राविधिक पक्षलाई विश्लेषण गर्दा कम्पनीको सेयर मूल्य बुुलिस तर्फ रहेको देखिन्छ । विस्तारै कम्पनीले सेयर मूल्यमा कालो छाँया आकारको मैनबत्तीलाई दुुई ठु्ुला मैनबत्तीले बलियो गरि घेरेको छ । यस अर्थ बजार निकै मूल्य बलियो बन्न पुुगेको संकेत कम्पनीले देखाएको छ । हालैमात्र कम्पनीले ह्यामर क्यान्डलस्टिक ढाँचा लामो तल्लो विकको साथ छोटो शरीरको बनेको छ, र तलको प्रवृत्तिको फेदमा पाइन्छ ।
एक ह्यामरले देखाउँछ कि दिनको समयमा बिक्रीको दबाब भए तापनि, अन्ततः एक बलियो खरिद दबाबले मूल्य फिर्ता ल्यायो। शरीरको रंग फरक हुन सक्छ, तर सेतो हथौडाले कालो हथौडा भन्दा बलियो बुल बजारलाई संकेत गर्दछ । तर फुुच्छर आकारको हतौडा पनि बनेको हुुँदा बजारमा चाप परेको देखिन्छ ।